» नायक अनमोल केसीको आफैसँग भिडन्त, ए मेरो हजुर ३ र क्याप्टेनमा कुन राम्रो ?
नायक अनमोल केसीको आफैसँग भिडन्त, ए मेरो हजुर ३ र क्याप्टेनमा कुन राम्रो ?
२९ माघ २०७५, मंगलवार २१:१०
हेटौँडा, २९ माघ । युवा दर्शकमाझ लोकप्रिय छवि बनाएका नायक अनमोल केसी यो हप्ता आफैसँग भिडेका छन् । उनका दुई चलचित्रको यतिखेर युट्युबमा भिडन्त परेको छ ।
अनमोलकै अभिनय रहेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को टिजर र चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को ट्रेलर यतिखेर युट्युब ट्रेण्डिङमा छ । करिब १० दिन अघि युट्युबमा अपलोड गरिएको चलचित्र क्याप्टेनको ट्रेलर यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यट्युव ट्रेण्डिङको ११ औँ नम्बरमा छ भने दुई दिन अघि सार्वजनिक गरिएको ‘ए मेरो हजुर ३’ को टिजर युट्युब ट्रेण्डिङको नवौँ नम्बरमा छ ।
यी दुबै चलचित्रमा अनमोलको लिड रोल छ । अनमोलसँगै ए मेरो हजुर ३ मा नायिका तथा निर्देशक झरना थापाकी छोरी सुहाना थापाले डेब्यू गर्दैछिन् भने क्याप्टेनमा उपासना सिंह ठकुरीले डेब्यू गर्दैछिन् । क्याप्टेनको ट्रेलरलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा १८ लाख १८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने ६१ हजारभन्दा बढी लाईक र ९ हजार ६ सयभन्दा बढी कमेन्ट गरिएका छन् । ट्रेलरलाई ५ हजार ४ सयभन्दा बढीले डिसलाईक गरेका छन् ।
त्यस्तै यता २ दिन अघिमात्र अपलोड गरिएको ए मेरो हजुर ३ को टिजरले युट्युब ट्रेण्डिङमा क्याप्टेनको ट्रेलरलाई उछिनेको छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा ए मेरो हजुर ३ को टिजरलाई ३ लाख ८९ हजार पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १६ हजार भन्दा बढीले लाईक र ९ सयभन्दा बढीले डिसलाईक गरेका छन् । भिडियोमा २ हजारभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
भिडियो बनाउने उत्कृष्ट सफ्टवयर–
युट्युब च्यानल र जिमेल आईडी कसरी बनाउने ?
पल र आँचलको प्रेमयुद्ध
स्वस्तिमा र सेड्रिनामा को राम्री ?
दुबईमा अशोक दर्जीलाई देखेपछि दर्शकहरु खुशीले भुतुक्कै
वडा अध्यक्षको नमूना फुलबारी
अशोक दर्जीको खतरा फ्यान (भिडियो सहित)
हेटौँडेली युवाहरुको नयाँ सर्ट मूभि ‘वास्तब’ रिलिज (हेर्नुहोस् भिडियो)